Manchester City ayaa gaartay guul aad u weyn kadib markii 2-1 ay kaga badisay West Ham… – Hagaag.com
Posted on 27 Febraayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Manchester City ayaa halkeedii kasii wadata bilawgii wacnaa ee safarka ay ugu jirto inay soo ceshatay hanashada Horyaalka Premier League ee England waxayna guul qaali ah 2-1 kaga badisay West Ham maanta oo Sabti ah, wareega 26-aad ee Premier League.
Manchester City ayaa sii dheereysatay rikoorkeedii guulaha ee tartamada kala duwan, taasoo sare ugu qaaday 20 guulood oo isku xigta, taas oo sidoo kale rikoor u ah kooxaha Premier League ee England.
Kooxda ayaa sii xoojisay hoggaanka kala horeynta iyadoo sare u qaaday dhibcaheeda oo ka dhigtay 62 dhibcood, 13 dhibcood ka sarreysa deriskeeda iyo kooxda ay sida tooska ah u xafiiltamaan ee Manchester United, iyadoo West Ham rasiidkeeda ku xirmay 45 dhibcood kuna jirta kaalinta afraad.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 1-1 ah, iyadoo Manchester City ay shabaqa u soo taabtay daafaca reer Portugal Robin Diaz daqiiqadii 30aad, halka weeraryahanka West Ham Michael Antonio uu isna u barbareeyay West Ham daqiiqadii 43aad.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa daafaca John Stones u dhiibay hogaanka kooxda Manchester City kadib markii uu dhaliyey goolkiii labaad daqiiqadii 68aad.
City ayaa sii wadata xirfadeeda quruxda badan xilli ciyaareedkan, waxaana ay ilaashatay rikoorkeeda iyadoo aan wax guuldaro ah la kulmin 27kii kulan ee ugu danbeysay, iyadoo ay u tahay guushii maanta tii 24aad ee kulamada, iyadoo 3 jeer barbaro gashay.
Manchester City ayaan wax guuldaro ah la kulmin tan iyo markii ay guuldaradii Tottenham 0-2 ka soo gaadhay 21kii November, sidaa darteed waxa ay rekoodhkeeda ka ilaalisay guuldarooyin tartamada kala duwan 98 maalmood.
Kooxda ayaa hal kulan u jirta rikoodh kale oo u dhigma rikoor hore oo la xidhiidha tirada kulamada isku xigxiga ee guuldaro la’aanta, taas oo gaadhay 28 kulan oo xiriir ah intii lagu jiray muddadii u dhaxaysay 27-kii April ilaa 3dii December 2017 oo uu sidoo kale ku hoggaamiyay tababaraha Isbaanishka Josep Guardiola.